Julen Lopetegui oo ka soo muuqan doona dhawaan Saaxada Kubada Cagta | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Julen Lopetegui oo ka soo muuqan doona dhawaan Saaxada Kubada Cagta
(21-11-2018) Tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid, ayaa dib ugu soo laabanaya shaqada macallinimo toddobaadyo kooban kaddib markii laga caydhiyey Los Blancos.
Julen Lopetegui ayaa la sheegay in loogu yeedhay shaqo tababarenimo oo ka saaraysa saaxadda naadiyada, kuna celinaysa heerkiisii xulalka, kaas oo uu ka tegay markii Real Madrid ay ka dhigatay beddelka Zinedine Zidane isagoo xilligaas shaqo wanaagsan ka qabtay xulka dalka Spain oo uu si fiican iskugu dabba-ritay ka hor intii aan bilowgii Koobka Adduunka xilka laga qaadin.
Xulka qaranka Maraykanka ayaa la sheegay inay xiisaynayaan Lopetegui, isla markaana uu buuxin doono booskii uu banneeyey Bruce Arena oo shaqada laga caydhiyey markii uu dalkaasi ku fashilmay inuu usoo baxo Koobka Adduunka markii ugu horreysay tan iyo 1986-kii, waxaana tababare ku-meelgaadh ah sii ahaa Dave Sarachan oo laba guul-darro oo xidhiidh ah kasoo hooyey kulamadii saaxiibtinimo ee England iyo Italy.
Maraykanku waxay aaminsan yihiin in Lopetegui uu isbeddel ku samayn karo xulka dalkooda oo u baahan dibu-habayn ballaadhan, waxaanay tixraac ka dhiganayaan shaqadii uu macallinkani kasoo qabtay xulka da’yarta Spain iyo waaweynkaba.
Si kastaba ha ahaatee 52 jirkan iyo xulka Maraykanka labadaba war rasmi ah oo ku saabsan arrintan lagama hayo, hase yeeshee warbaahinta dalka Spain ayaa tibaaxday inuu jiro xidhiidh dhexmaray oo ay suurtogal tahay inuu horseed ka noqdo inuu shaqadaas qabto.